Hadalkana nin yidhi waa dhigaa, sii dheh baa dilaye
Inaan dhaabadeeyaan rabaa, dhawr kal dabadeede
Dhaxalkeeda nimankii lahaa, way dhebaan-dhebiye
Iyagaa dharaaraba intaan, dhaafay sii odhane.
( Dhul-gariir, Hadraawi)
Waxaan akhriyey maqaalkii magaciisu ahaa "Nolosha Warqadaha" ee uu qoray mudane Cabdifataax Maxamed Axmed, dabadeedna waxaan is idhi, dadku mawduucyada jaadkan oo kale ah ee muhiimka ah aad ugama hadlaan, ee bal wax ka dheh arrinta. Laakiin inta aynaan halkan ka gudbin aynu caddayno in aynu ereyga "dhigane" doonayno in uu mararka qaarkood inoo galo halka ereyga kale ee "buug" uu galo, maxaa yeelay isagu waa erey qalaad. Sidaas oo ay tahay haddana mararka qaarkood isaga qudhiisana waynu soo qaadan karnaa, waayo waa erey muhiim ah oo la soomaaliyeeyey, hadalkeennana mar kasta ku jira.
Waxaan badhtamihii sagaashannadii qarnigii tegey idaacad Af-Soomaali ku hadlaysa ka dhegeystay war sheegayey in uu Shiinuhu dal ay xinifi malaha ka dhexaysay ugu hanjabay in uu "badweyn dab ah" muquuran doono haddii uu isku dayo in uu arrimihiisa soo faraggeliyo. Soomaalidu digo yar oo meel tuunsan oo la gubay ayey kaga hadashay maahmaah dhan oo ay tidhi: "Digo kulaylkeed nin galay uun baa og!" Maxaad u malayn lahayd haddii ay jiri lahayd badweyntaa uu Shiinuhu sheegay oo kale? Koley wax uun. Ka warranse badweynta dhiganayaasha?
Badweynta dhiganayaashu (buugaagtu) waa wax jira, waxayna ku fiican tahay in aanay iyadu sida badweynta kale ee aynu naqaanno degdeg wax u dilin. Ruuxii badweynta caadiga ah gala isaga oo aan dabbaal baran, haddii loo gurman waayo, naftu waa ay daynaysaa. Laakiin qofkii badweynta dhiganayaasha ku dhaca isaga oo aan tabaheeda aqoon waxaa laga yaabaa in aanay sidiisii hore waxba iska beddelin. Waxaa laga yaabaa in uu yara dareemo waxa loo yaqaan "indha-daraandar". Laakiin armaa laga yaabaa in ay iyada qudheedu si aan la dareemayn wax u qarqiso, oo ay qofka ka dhigto qof aan ahayn kii aynu naqaanney ee caadiga ahaa. Waa suurta gal. Shar iyo khayr labadaba waa laga fili karaa.
Nin gabyaa ah oo bulshada Carabta u dhashay ayaa gabay tiriyey mar uu ka hadlayey faa�idada dhiganayaasha. Ninkaasi waxa uu ku halqabsaday buug uu lahaa, gabaygii uu tiriyeyna innaga oo aan sidiisii u wada qorayn haddii aynu murti ka soo qaadanno ugu dhowaan waxay noqonaysaa sidatan:
Buuggaygow waxaad iiga dhigan tahay sidii beer midho leh oo kale
Waxaan kaa goostaa ubax anigoo aad iyo aad kuu danaynaay
Waqtiga waxaad igu dhaafisaa barashada iyo falanqaynta aqoonta
Habeenkii sheekooyin baad iigu deeqdaa maalintiina wadeey baad ii tahay
Buuggaygow waxaad tahay albaabka aan ka galo horumarka iyo barwaaqada.
Aqoonta, qoraallada, murtida iyo suugaanta, iyo wax kasta oo cilmi ah maanta waxaa loogu tagaa dhiganayaasha (buugaagta). Taa macnaheedu waa mar kasta oo aynu dhigane ka hadlayno isaga laftiisa kama hadlayno, oo isagu mararka qaarkood waa uu madhnaan karaa, waxase aynu ka hadlaynaa waxa ku jira oo ah aqoon, murti iyo waayo-aragnimo la kaydiyey � caqli la ururshay.
Noolaha oo dhami waxa uu u baahan yahay wax uu quuto si uu jidh ahaan u sii jiro waxna u qabsan karo. Laakiin dadku ilaalinta jidhka oo keliya uun kuma qanco, ee waxa uu u baahan yahay wax uu nafta lafteeda ku quudiyo. Haddaba buugaagtu waa wixii nafta quudinayey, maskaxdana korinayey. Sida uu abwaankaa carbeed sheegay waa albaabkii laga gelayey horumarka, barwaaqada iyo weliba aan ku sii daree, ku sii negaanshaha toobiyaha dadnimada iyo samaddoonnimada.
Laakiin waa in mid maanka lagu hayaa: buug oo dhami faa�ido ma wada laha, sida aanu roob oo dhamiba waxtar u wada lahayn. "Mayey aafo miidhan ah abaar, muruxsan baa dhaanta" � Cali Jaamac Haabiil. Buug luggooyo ahna iftiin aqooneed laga heli maayo, waxana dhaama qori dab ah oo aad gudcur dam ah meel yar ku iftiinsato!.
Dhiganayaasha mar waxaa ku kaydsan aqoon, murti iyo wax naftu maaweelo ka dhigato saacadaha firaaqada. Mar xeerarkii nolosha iyo nabadda lagu ilaalinayey. Mar sheeko-faneedyo habaysan oo casri ah, kuwaas oo sida telefishanka oo kale looga daawan karo marxalado iyo dhacdooyin la soo maray, oo xumaan iyo samaanba, saamayntooda lahaa. Mar kalena waxaynu ku dhigi karnaa gabayadii Ina Jadeer, Salaan-Carrabey, Cali Jaamac Haabiil, Faarax Shuuriye, Aw Yuusuf Barre, iyo abwaannadii kale ee murtida hibada u lahaa. Mar kalena��.!
Murti-yaqaanka akhristaha ah marna qoraaga ahi waa uu kaga xeeldheer yahay aqoonta iyo aqoon-baadhistaba dadka caadiga ah, maxaa yeelay waa qof had iyo jeer ku jira jawi ama caalam kale oo qof aan ogeyni aanu dareemayn. Dadka badankoodu wax ma akhriyaan, ee dhegaha uun bay wax ku-tidhi-ku-teen ah isugu sheegaan. Xaalkoodu waa "dhegaha uun igala soco"! Dadka sidaas ah weeyi dadka bulshada hadallada aan nuxurka lahayn ku wareeriyaa. Ma oga in dalabka buuggu yahay si ku dhow midhaha heestii ahayd: "Wixii cusub iga warayso, waxaad maqashana ka fiirso."
Inta ay faa�idada leeyihiin in le�eg ayey buugaagtu xumaanna yeelan karaan, oo waxaynu og nahay in shay kasta oo adduunka guudkiisa saaran inta badan lagu meteli karo sidii middi laba af leh oo kale, oo kolba dhankii la adeegsadaa wax goyn karo. Buugaagta xag san iyo xag kale labadaba waa loola dhaqaaqi karaa. Siyaasadaha gurracan iyo hoogga qaaradda Afrika lagu wadoba shalay dad baa dhiganayaal ku dajiyey, maantana ku dejinaya.
Markaa xaalku sow ma aha weli maynaan xoroobin? Shalay bunduq baa la inagu haystay, maantana buugaag baa la inagu haystaa. Haddii buugaag la inagu haysto miyeynaan ku dhex jirin, innaga oo hafanayna oo aan is-ogeyn, badweyn dhiganayaal ah oo aynu ilaa maanta ka dhex-bixi kari la�nahay? Mar hore waxaynu soo sheegnay in badweynta dhiganayaasha qofka aan tabaheeda aqooni uu kala kulmo "indha-daraandar". Laakiin arrintu immika halkaa waa ay dhaaftay, waxayna u gudubtay meel kale. Jiritaankii ayeyba maraysaa!
Badweynta dhiganayaasha wanaag iyo dhibaato labadaba waa lagala kulmi karaa. Laakiin, si kastoo ay arrintu tahayba, waxa meesha soo gelaya beyd gabay ah oo ku jiray gabay uu abwaan Cabdillaahi Suldaan Maxamed (Timacadde) lahaa, kaas oo ahaa:
Weli seetadii baa ku xidhan, saan-madoobaha e.